Izindlela Ezi-7 Zokuqinisekisa Iwebhusayithi Yesikhungo Samakhasimende | Martech Zone
NgoLwesine, ngo-Okthoba 15, 2015 UDenyse Drummond-Dunn
Ngisanda kubuyekeza amanye amawebhusayithi ezinkampani ze-CPG / FMCG nokuthi ngithuke kanjani! Lezi yizinhlangano ezinomthengi ngegama lazo uqobo ngakho-ke kufanele kube yizo ezigxila kakhulu kubathengi, akunjalo? Yebo kunjalo!
Futhi nokho bambalwa kubo ababonakala bethatha umbono womthengi lapho benza amawebhusayithi abo. Bambalwa kakhulu abajabule ngokwanele ukungenza ngifune ukubuyela kuwebhusayithi yabo, okungenani nganoma yisiphi isikhathi kungekudala!
Kusukela ekubuyekezweni kwami ​​kwamasayithi amaningana, kubukeka sengathi izinhlangano eziningi zakha amawebhusayithi wazo ukwabelana ngezinto namakhasimende abo. Noma kunjalo, imininingwane they bafuna ukwabelana, hhayi lokho amakhasimende abo angathanda ukuba nakho.
Lokhu kungenze ngacabanga ngalokho okungabaluleka, ngokombono wekhasimende, ukukufaka kuwebhusayithi. Nalu uhlu lwami lwezinto eziyisikhombisa, kepha ngiyayemukela imibono yakho noma izengezo kumazwana angezansi.
Izinto eziyi-7 OKUFANELE zibe kwiwebhusayithi
Isakhiwo esicacile okungukuthi enembile. Usazofaka imephu yesayithi yalabo abadinga usizo olwengeziwe noma abangenangqondo ekusesheni kwabo.
Kulula ukuthola izixhumanisi zokuxhumana, noma imininingwane egcwele yenkampani ekhasini lasekhaya. Lokhu kufanele kufake izinombolo zocingo, i-imeyili, amakheli okuposa nawomgwaqo, nezithonjana zokuxhumana. Kufanele wazi ukuthi kulezi zinsuku, amakhasimende avame ukuya kuwebhusayithi ukuthola ukuthi angaxhumana kanjani nomkhiqizo noma inkampani. Ngakho-ke kwenze kube lula ngangokunokwenzeka kubo.
Uhlu lwemikhiqizo yakho, imikhiqizo namasevisi. Njengoba amakhasimende acabanga imikhiqizo ngaphambi kwezigaba, faka izithombe zazo, kanye nemininingwane efanele njengokuqukethwe kwepakethe nezithako. Faka iziphakamiso zokusebenzisa, ikakhulukazi uma kukhona ukulinganiselwa, nolwazi lokuthi ungakuthola kuphi, ikakhulukazi uma ukusatshalaliswa kuvinjelwe. Lawa ngamaqiniso amancane okufanele uwafake, kepha-ke ungafaka imininingwane eyengeziwe owaziyo ukuthi ingaheha futhi ibaluleke kumakhasimende akho ukuthi ayazi.
Isigaba mayelana nesikhombisa imininingwane yenkampani, kufaka phakathi iqembu labaphathi bayo - hhayi (nje) abaqondisi abangewona abaphethe. Uma uyinkampani yomhlaba wonke, engeza izindawo ozibonayo futhi unikeze ukukhetha kwezilimi ekhasini eliyisiqalo. Isitatimende semishini yenkampani, amanani ayo, amasu namasiko nakho kubalulekile ukwaba nokusiza ukwakha isithombe esihle namakhasimende. Yize kufanele ube nesigaba semidiya sezintatheli nabatshalizimali, namakhasimende athanda ukwazi ukuthi kwenzekani ngemikhiqizo ayithandayo, ngakho-ke engeza isigaba sezindaba ngezindaba zakamuva.
Okuqukethwe okuyigugu ngokubuka kwamakhasimende. Isayithi kumele livuselelwe njalo futhi lihambisane nesiphequluli esinqamulelayo nezithombe ezinobungani bewebhu. Njengoba izithombe namavidiyo kungenye yezinto ezidume kakhulu kuwebhu, zifake noma umeme amakhasimende akho ukuthi azengeze awazo.
IPurina isiphenduke indawo ethandwa kakhulu ngenxa yokuqukethwe kwayo okwenziwe ngumsebenzisi, okubuye kwengeze ukukhangisa kwayo kwakamuva kweTVC nokuphrinta. Abantu bathanda ukubuka, ukuphawula nokwabelana ngezinto ezintsha, ngakho-ke kwenze kube lula ukuthi bazenze futhi bacele ukubuya njalo bezothola izindaba zakamuva.
Isigaba se-FAQ esinemibuzo evame ukubuzwa. Le ndawo nayo idinga ukuvuselelwa njalo ngemibuzo engena emigqeni yokunakekelwa nethimba lezinsizakalo zamakhasimende.
Izinsiza ezinjengokusesha, ukubhalisa nokubhalisa amafomu, nokuphakelayo kwe-RSS kumakhasimende akho kufanelekile ukungezwa, ukuwasiza ukuthi athole okuningi kokuqukethwe kwesayithi lakho. Ngaphezu kwalokho, amakhodi wokulandelela nokuhlaziya azokusiza ukuthi ukwazi ukulandela ukuthi amakhasimende akho abheka kuphi nokuthi yini abheka kakhulu kuyo. Lokhu kuzohlinzeka ngemininingwane eminingi kunaleyo etholwe ngokubuza amakhasimende akho ngqo, yiziphi izingxenye ezidinga ukubuyekezwa noma ukushintshwa.
Isibonelo esihle sokukhuthazwa
Elinye lamawebhusayithi angcono ezinkampani engihlangabezane nawo futhi futhi kumnandi kakhulu ukusebenzisana nawo, yisiza se- I-Reckitt Benckiser. Kwakungithakazelisa ngempela futhi kungihlanganyela isikhathi esithile nasezindaweni eziningi ezahlukahlukene. Isibonelo, esikhundleni sohlu olujwayelekile lemikhiqizo yalo namalogo abo, ikhombisa ukuthi ikubiza kanjani IPowerbrand umugqa okhonjiswe eshalofini lokuthengisa noma emakamelweni endlu ebonakalayo (ngiyavuma ukuthi imiphumela yomsindo ingicasulile ngandlela thile, kepha ungayicisha). Ngemuva kwalokho ungachofoza esithombeni somkhiqizo ukuthola eminye imininingwane kuwo, isigaba kanye nokukhangisa kwamuva.
Ukumema ukubamba iqhaza kwezithameli kukhuthaza abantu ukuthi bachofoze kuyo yonke imikhiqizo ukuthola okuningi ngabo. Nemiboniso exhumanayo yezwe lezinkampani iRekitt Benckiser, ngokungezwa kwemidlalo nezinselelo, ingeza isikhalazo esengeziwe, hhayi kubathengi kuphela, kodwa nakwabasebenzi abedlule, abakhona nabangahle babe khona.
Bheka indawo yabo exhunywe ngaphezulu bese uyiqhathanisa newebhusayithi yakho yenkampani. Yikuphi ongathanda ukuchitha isikhathi kukho? Ingabe isayithi lakho liyinkampani edidiyelwe noma yamakhasimende? Ngabe unazo zonke izinto eziyisikhombisa ezibalulwe ngenhla zewebhusayithi yakho? Uma kungenjalo, sekuyisikhathi sokucabanga ngamakhasimende kuqala.
UDenyse unesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengama-30 ezindimeni eziphezulu zokuphatha noNestle, Gillette noPhilip Morris International. Usungule futhi unguMongameli we-C³Centricity, iseluleko somhlaba wonke esihlinzeka ngezeluleko zamasu emaqenjini aphezulu wemikhiqizo eyizigidigidi zamadola. Incwadi yakhe yakamuva ethi Winning Customer Centricity isiyatholakala.
Ungawusebenzisa Kanjani Umbiko Wokuguqulwa Okusha kwe-AdWords